चर्को बिबादका बीच सरकारले तयार पारेको चारबुँदे संबिधान संशोधन प्रस्ताब गृहमन्त्री निधिले गरे सार्वजनिक, के-के छ ४ बुदामा? – ZoomNP
चर्को बिबादका बीच सरकारले तयार पारेको चारबुँदे संबिधान संशोधन प्रस्ताब गृहमन्त्री निधिले गरे सार्वजनिक, के-के छ ४ बुदामा? प्रकाशित मिति: मङ्गलवार, मंसिर १४, २०७३ समय - ८:४६:१६ काठमाडौं, सरकारले तयार पारेको चारबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक गरेका छन् । निधिले सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भाषाका सम्बन्धमा सरकारले नेपालको संविधानबमोजिम भाषा आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।